Madaxweyne Xasan oo ka qeyb galay caleema saarka madaxweynaha cusub ee Turkiga. - Wargeyska Faafiye
Home 2014 August 28 .Warka Madaxweyne Xasan oo ka qeyb galay caleema saarka madaxweynaha cusub ee Turkiga.
Madaxweyne Xasan oo ka qeyb galay caleema saarka madaxweynaha cusub ee Turkiga.
August 28, 2014 · by	Liban Farah ·
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa magaaladda Ankara ee dalka Turkiga uga qeyb-galay xafladda caleema-saarka madaxweynaha cusub ee dalkaas Recep Tayyip Erdoğan.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa wuxuu ka mid ahaa madaxda caalamka ee lagu casuumay ka qeyb-galka xafladda caleema-saarka.
Madaxwaynaha dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ahna Raisul wasaarihii hore ee dalkaasi ayaa maanta magaaladda Ankara loogu dhaariyay xafiiska madaxwaynaha Turkiga kadib markii uu ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee dhawaan ka dhacday dalkaas.
Erdogan oo da’diisu tahay 60 sano ayaa xilka madaxweynaha Turkiga sii hayn doona afarta sano ee soo socota.
Madaxweynaha cusub ee dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa waxaa lagu xasuustaa xilligii uu reysul wasaaraha ahaa kaalintii weyneyd ee uu ka qaatay gurmadkii loo sameeyay shacabka Soomaaliyeed sanadkii 2012-kii, xilligaas oo macluul ba’an ay ka jirtay Soomaaliya iyo booqashadii tariikhiga ahayd ee uu ku tagay magaaladda Muqdisho.
Islamists kill four in cross-border attack on Kenyan town.
Somali refugee student’ mowed down classmates with his car and slashed them with a butcher’s knife at Ohio State University.
Daawo Muuqaal Mas maalin kasta cuni jiray Caruurta yar yar ee Yaxaaska oo markiisa lagu qadeeyay